Voadika ny 27 Desambra 2016 9:28 GMT
Tohano ny Fahalalaham-Pitenenana ho an'ny rehetra, na aiza na aiza misy azy
Hatramin'ny taona 2005 ny Global no niasa hanangana ireo tetezam-pifandraisan'ireo firenena sy fiteny isan-karazany ho fanohanana ny fahaleovantenan'ny media, ny fisokafan'ny aterineto, ary ny zon'ny rehetra, avy amin'ny toerana rehetra, halalaka amin'ny fitenenana. Tohano izahay hanangana ireo tetezana ireo, fa tsy rindrina mampisaraka.
Mihevitra izahay fa vaindohan-draharaha noho ny hatramin'izay ny iraka ampanaovina anay amin'izao fotoana izao. Ankehitriny, manomeza ho anay hanampy anay hitozo amin'ity asa manandanja ity.
Ny fanomezana dia voarain'ny Friends of Global Voices [Sakaizan'ny Global Voices] amin'ny alalan'ny sata tsy mpitady tombombarotra 501(c)3, ary tsy andoavan-ketra ho an'ireo Olom-pirenen'i Etazonia mpandoa hetra. Manaiky ny ankamaroan'ireo karatra fahambola fantadaza ny PayPal (tsy voatery ho manana kaonty PayPal).
Fanomezana atao isam-bolana
Ny famindrana vola isam-bolana ataonao dia fanohanana maharitra ho anay hahatonga ny Global Voices ho maimaimpoana sy misokatra ho an'ny rehetra.
Fanomezana Goavana, Fanohanan'ny Vondron'Orinasa, Fanontaniana?
Raha maniry ny hanao fanomezana goavana ianao na te-hahazo fampahafantarana bebe kokoa momba ny safidy hafa handoavana ny vola, na ho mpanohana ara-bola, na izay mety ho karazam-panohanana hafa, dia miangavy mba manorata seramailaka amin'ny Tale Mpanatanteraka Ivan Sigal ao amin'ny ivan AT globalvoices DOT org.
3 ora izayMediam-bahoaka
Vakio amin'ny teny Shqip, አማርኛ, عربي, বাংলা, Български, 繁體中文, Dansk, Esperanto , فارسی, Filipino, Français, Ελληνικά, हिन्दी, עברית, bahasa Indonesia, Italiano, ភាសាខ្មែរ, 한국어, ଓଡ଼ିଆ , پښتو, Română , русский, srpski, Español, Tetun, اردو, Türkçe, Svenska, ਪੰਜਾਬੀ, English
Mey 2018 146 Lahatsoratra